Topnepalnews.com | संस्मरण: त्यो कहालीलाग्दो बैशाख १२
Posted on: May 03, 2016 | views: 441
बैशाख १२ गतेको त्यो दिन । शनिबार भएपनि कार्यालय जानै पर्ने बाध्यता । त्यतिबेला रातोपाटीसँगै सामाखुसीस्थित एक संस्थामा पनि कार्यरत थिएँ। जहाँ दिउँसोको समय मेरो कार्यतालिका हुन्थ्यो । अरुदिन ११ बजेभित्रै सो कार्यालय पुग्ने म शनिबार त्यसमा पनि कामको चाप कम हुँदा ढिला गरि निस्किए ।
निस्कनै लाग्दा जहानले आफूपनि माछापोखरीसम्म जाने बताएपछि सँगै गयौं माछापोखरीसम्म । माछापोखरीमा केहिबेरको अलमलपछि जहानलाई कोठमा पठाएर आफूचाहिँ लागे कार्यालयतिर !
ढिला गरि म पुग्दा सहकर्मी समुन्द्र घिमिरे अफिस पुगिसकेका । सामान्य औपचारिकतालगत्तै कम्युटरमा आवश्यक काम सुरु मात्रैके गरेको थिए–एउटा आवाज आयो, जुन आउँदा चारतल्ले भवनमा कुनै कम्पन थिएन । मात्र अनौठो आवाज थियो -
मैले भनेँ -होइन, कस्तो अनौठा आवाज आयो यो?
हो त है–समुन्द्र बोले
तल ग्यारेजमा मोटरसाइकल स्टार्ट गर्या होला
समुन्द्रले यसो भन्दै गर्दा अकास्मात अघिको आवाज भयानक मात्रै बनेन पूरै भवन बेजेडले हल्लिन थाल्यो
जब म चिच्याउन के थालेको थिए समुन्द्र हाँस्न थाले । तर भाग्ने सुर गरेनन् । मैले जोडले पुन दोहोर्याएपछि भाग्न त खोजे गरे अत्याधिक कम्पन र डरले उनी भागेनन् बरु टेबुलभित्र छिरेछन् ।
पछि भन्दै थिए–भयानक भुकम्प हो भन्ने ख्यालै गरिनछु ! त्यतिबेलासम्म म भने खुल्ला सडकमा पुगिसकेको थिए । जतिबेला कम्पन जारी थियो । यद्यपी चार तल्ले भवनको पहिलो तल्लाबाट खुल्ला ठाउँसम्म पुग्दाको समय भने कम्ता कहालीलाग्दो थिएन । भवनको सिँढी झर्दैगर्दा बेजोडको कम्पनले बारम्बार खुट्टा लर्बराउँथ्यो ।
कहिले यता र कहिले उता हल्लिदा पाइला सार्नै नसकिने । जब सिढि झरियो प्यासेज हुँदै बाहिर निस्किँदै गर्दा एकाएक भवनको वाल चिरियो। भूई फाटियो । हेर्दा हेर्दा भवन ढल्नै लाग्यो । त्यतिबेला लाग्यो–जीवनको यहीँ अन्त्य हुन लेखेको रहेछ । सेकेण्ड भरमा गर्भवती श्रीमति सम्झिए, जो भर्खरै डेरा फर्कँदै थिइन्। खैं केहि पो भइहाल्यो कि ! घर सम्झिए, जहाँ बुढा बाआमा एक्लै थिए । आफन्त, साथीभाई सबैसबै !
त्यतिबेलाको समय स्मरण गर्दा अहिले लाग्छ । जीवन अनमोल छ । लगभग एक मिनेटको त्यो कोलाहाल समयमा लोभ, मोहसबै पत्तासाथ भइसकेका थिए मनमष्तिस्कबाट । केबल थिए त बाँच्ने आशाहरु । जीवनका अर्थहरु । हुन पनि हो, मानिस सँधै धनसम्पत्तीका लागि संघर्षरत रहन्छ । त्यही धन सम्पत्ती, एस आरामको चक्क्रले त मानिसलाई लोभी बनायो। लोभले कोलाहाल जन्मायो । तर–जीवनको अन्तिम घडीमा ज्यानको महत्व हुँदो रहेछ। धनसम्पत्ती भन्नेकुरा गौण । त्यतिबेला मनमनै लागेको थियो–मान्छे किन पैसाका लागि महित्ते गर्नेरहेछ ?, आखिर पैसा भन्नेकुरा केहि रहेनछ । पैसा त केबल विलासिलता नै रहेछ । सम्पत्ती त जीवननै हो ।
बाहिर निस्कँदा मुटुका धड्न बढेका थिए । अघिसम्म फुर्तिलो अनुहार लोलाएका थिए । जताततै कोलाहाल चिच्याहट । सडकमा मोटरसाइकलहरु असरल्ल थिए । गाडीहरु रोकिएका अवस्थामा थिए । भागदौड मच्चिएका थिए । भुकम्प त आयो कति रिक्टरस्केल र कहाँ केन्द्रबिन्दु पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसको मतलब पनि गरिएन । डेरामा जाँदै गरेकी श्रीमतिलाई सम्पर्क प्रयास गरेँ पटकक पटक । तर , प्रयास सफल भएन । फोन नलागेपछि उनको अवस्थाबारे चिन्ता बिढ्यो । हतारहतार स्कुटरको व्यवस्था गरेर उनी डेरा फर्किने रुट हुँदै नेपालटार लागियो । जतिबेला पराकम्प जारी थियो। चुनौति थियो हिँड्नलाई । त्यस्तो अवस्थामा सहकर्मी समुन्द्रले साथ दिए ।
विपत्तीमा बाँचिएको थियो । आफू बाँचेर आफन्त तथा जीवनसाथीलाई बचाउन सकिएन भने फेरि जीवनको के सार हुन्थ्यो र ! त्यसैले त चुनौतिका बीच पनि जहानको सहयोगका लागि जुटिएको थियो । धन्य उनीपनि सुरक्षित रहिछन् । तनाव अझैं सकिएको थिएन । गाउँमा बाआमा थिए । आफन्त थिए, सबैको एकएक सुचना पाएपछि मनमा शान्ती मिल्यो । धन्य कसैलाई केहि भएको रहेनछ । लामो प्रयासपछि रातोपाटीको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा पनि सम्पर्क भयो। कार्यालयको भवन भूकम्पले ध्वस्त भएपनि भाग्यबस सहकर्मी साथीहरुलाई भने केहि भएनछ ।
तर, आफैं भने स्कुटरबाट लडेर घाइते हुन पुगेँ । जसका कारण विनाशकारी भुकम्पबारे सुसूचित गराउनु पर्ने बेला केहि दिन खुल्ला आकाशमै खुम्चिनु पर्यो ।
वातावरण कोलाहालमय थियो । कोहि ट्याक्सीमा त कोहि मोटरसाइकल या बोकेर पनि घाइते लिएर अस्पतालतर्फ दौडिदै थिए । कोहि आफन्त भग्नावशेसमा पुरिएको भन्दै चित्याउँदै थिए । साँचैनै बैशाख १२ को त्यो दिन कोलाहालमय थियो । त्रासदीपूर्ण थियो ।